Fanomezana natolotry ny Amerikana Avaratra ho an’ny Tafika an’habakabaka tamin’ny volana Aogositra 1988 ity fiaramanidina DC3 ity. Nitondra ireo olo-manankaja sady nanampy betsaka tamin’ny fahatomombanan’ny andraikitra napetraka teo amin’ny mpitandro ny filaminana hampandriana fahalemana ny asany tamin'izany. Ao amin'ny « Base Aérienne Tactique » (BATAC) Arivonimamo ilay fiaramanidina DC3 amin’izao, ary notokanana ho "Vakoka" tamin’ny 10 mey 2019 lasa teo. Ny 21 janoary 1989 kosa ny voalohany, ary tamin'ny 29 jona 1996 ny sidina farany nataon'ity DC3 ity. (Jereo Sary Tohiny)
Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny reny, dia makarakara hetsika Festival des jardins ny alliance française Andavamamba. Misy araka izany ny varotra fampirantiana ireo karazana voninkazo sy ny mety ho manodidina ny zaridaina, misy ihany koa ny fampianarana maimaimpoana ny fomba fikolokoloina zaridaina. Manome fotoana ny AFT Andavamamba ny 23, 24 ary ny 25 mey ho avy izao hitsidika izany. Marihina moa fa 1 000ariary ny vidim-pidirana. (Jereo Sary Tohiny)
Sambany i Madagasikara no hampiantrano ity atrikasa lehibe ity, izay tarihin’ny manam-pahaizana momba ny fampianarana ny teny anglisy avy amin’ny Departemantam-panjakana amerikana, ary misahana ny Faritra aty Afrika. Mpampianatra teny anglisy miisa 333 avy amin’ny Faritra 22 manerana ny Nosy, araka izany no handray anjara amin’ity Fikaonandoham-pirenena momba ny Fampianarana Teny Anglisy ity, izay hotanterahina eny amin’ny Centre de Conférence Internationale - CCI Ivato ny alatsinainy 20 mey ho avy izao.
Feno 20 taona omaly 13 mey 2019 ny nanamasinana Eveka an'i Mgr Philippe Ranaivomanana. Papa Joany Paoly II no nanendry an'i Mgr Philippe Ranaivomanana ho Eveka vaovao hitantana ny Diosezin'Ihosy ny 2 janoary 1999. Mgr Philibert Randriambololona, nampian'i Mgr Felix Ramananarivo sy Mgr Fulgence Rabeony, no nanamasina an’i Mgr Philippe Ranaivomanana ho Eveka hitondra ny Diosezin'Ihosy, 13 mey 1999. Mitantana ny Diosezin'Antsirabe i Mgr Philippe Ranaivomanana ankehitriny, izany dia nanomboka ny 13 novambra 2009.
Filankevitry ny minisitra tamin’ny 17 aprily 2019 no nandraisana ny Didy hitsivolana manafoana ny lalàna laharana faha-2017-011 tamin’ny 26 jolay 2017 mikasika ny politikam-pirenen’ny sarimihetsika sy ny sary miaina araka ny volavolan-kevitra naroson’ny Minisiteran’ny serasera sy ny kolontsaina. Nampahatsiahivina tamin’ny tati-baovao nomena ny mpanao gazety tamin’io, fa ny lalàna laharana faha-2018-037 mikasika ny fotokevitra mifehy ny orinasam-panjakana na sampan-draharaham-panjakana dia milaza mazava fa didim-panjakana fa tsy lalàna no hamaritana ny fananganana sampa-draharaham-panjakana tahaka ny OMACI na ny Ofisy malagasy momba ny sarimihetsika sy ny sary miaina.
Rehefa niamboho ny mpanjaka Bhumibol Adulyadej ny taona 2016, dia nafindra amin'ny zanany lahy Vajiralongkorn, mitondra ny anarana fanjakana Rama X, ny fiandrihanana. Nisy ny fisaonana nandritra ny roa taona, ary omaly alahady 05 mey no natao ny fombofomba rehetra ametrahana ny fiandrihanan'ny mpanjaka vaovao. Maharitra 3 andro ny fety sy ny fombafomba rehetra anatanterahina izany famindrana fiandrihanana izany, izay andaniana vola 26 millions d'euro. Tomefy olona miakanjo mavo, lokon'ny fiandrianana ny lapan'ny Bangkok, nentina nolanjaina manodidina ny lapa moa ity mpanjaka vaovao ity, izay izy no tanora indrindra hatramin'izay mpanjaka nifadimby izay. Nahatratra 7km ny olona nanaraka izany diabe izany, izay notronon'ny olona efa ho 200 000 tany.
dimanche, 05 mai 2019 13:47
Ramadany 2019: Hanomboka rahampitso alatsinainy 6 mey
Hifanontona ny fanombohan’ny volana Ramadany sy ny fampielezan-kevitra amin’ny fifidianana solombavambahoaka amin’ity taona ity. Hanomboka rahampitso alatsinainy 6 mey 2019 ny Ramadany ary hifarana amin’ny talata 4 jona 2019. Marihina ny alarobia 5 jona 2019 ny « Aïd al-Fitr ». Tany amin’ny taonjato faha-VII no niditra teto Madagasikara ny finoana silamo. Tombanana ho 1,1 % ny Malagasy no silamo.
Notontosaina omaly alatsinainy29 aprily, tetsy amin'ny zaridaina Antaninarenina, ny foara ho an'ny boky andiany fa 15. Tonga nanotrona sy nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy ny minisitry ny serasera sy ny kolontsaina, Lalatiana Andriatongarivo. Manodidina ny roampolo eo ho eo ny trano eva mampiranty sy mivarotra izany boky izany, izay ahitana karazana boky maro toy ny baiboly, fampianarana amin'ny ankapobeny. Hifarana ny sabotsy 4 mey izao ity Foara ho an'ny boky ity.
Efa aman-taonany maro no tsy nisy teatra tato amin’ity toerana ity. Tsy ny tropy teatraly no tsy vonona, fa ny fotodrafitrasa no tsy afaka nampiasaina noho ny fahasimbany. Mijanona ho fampanantenana ny fanarenana ny “Teatra Monisipaly” Isotry-Antananarivo. Tsy vitan’ny hoe fialamboly anefa ny mijery teatra, fa fitaizana ary tena nanana ny lanjany ara-tantara mikasika ny fitiavan-tanindrazana. (Jereo Sary Tohiny)